.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Flash Songs ဝါသနာရှင်များအတွက် အထူးလက်ဆောင်
Flash Songs ဝါသနာရှင်များအတွက် အထူးလက်ဆောင်
သူငယ်ချင်းများ အားလုံး မင်္ဂလာပါ။ ဒီနေ့တော့ Flash Songs ဝါသနာရှင်များအတွက် ကျွန်တော် စုဆောင်းထားတဲ့
Flash Effect တွေ ၊ မြန်မာဖောင့်အလှတွေ ၊ အင်္ဂလိပ် ဖောင့်အလှတွေ ၊ အားလုံးကို စုစည်းပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အရင်တုန်းကလည်း တင်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ခုတစ်ခါက Flash Effect ပေါင်း ၁၅၀ ကျော် ၊ မြန်မာဖောင့်အလှများကို
အရင်တုန်းက ဒီနေရာလို ဖောင့်အမျိုးအစားတစ်ခုစီ ဒေါင်းလုပ်လင့် မပေးတော့ပဲ အားလုံးကို ဖိုင်တစ်ခုတည်းမှာ
စုပြီး တင်ပေးထားပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ဖောင့်အလှတွေကိုလည်း http://cooltext.com/ က လူကြိုက်အများဆုံး ဖောင့်
အမျိုးအစား ၁၀၀ ကို Zip ဖိုင်တွေဖြည်ပြီး ကျွန်တော် Zip ဖိုင်တစ်ခုတည်းမှာ စုပေးထားပါတယ်။ Font ၁၀၀ ဆိုပေမယ့်
တစ်ချို့ဖောင့်တွေက အထဲမှာ၂ မျိုး ၃ မျိုးလောက်ဆိုတော့ အားလုံး 130 ကျော်ပါတယ်။ ဒေါင်းပြီး Zip ဖိုင်တစ်ခုသာ
ဖြည်ရတော့မှာမို့လို့ သူငယ်ချင်းတို့ အားလုံး လွယ်ကူသက်သာစွာ ဒေါင်းယူ အသုံးပြုလို့ ရအောင်လုပ်ပေးတာပါ။
ကဲ ပထမဦးဆုံး ကျွန်တော် စုထားတဲ့ Flash File တွေ ဒေါင်းယူဖို့ အောက်က လင့်ကနေ သွားလိုက်ပါ။
နောက်ထပ် မြန်မာဖောင့် အလှတွေ စုပြီး တင်ပေးထားတာကိုတော့ အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းပါ။
Download: All Myanmar Fonts
အင်္ဂလိပ်ဖောင့်အလှ 130 ကျော် စုတင်ပေးထားတာကိုတော့ အောက်မှာ ဒေါင်းယူလိုက်ပါ။
Download: Top 100 Fonts
Flash Songs ဝါသနာရှင် သူငယ်ချင်းများအားလုံး ပျော်ရွှင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် စုဆောင်းထားတဲ့ Flash Effect, English Font အလှတွေနဲ့ ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့
ရထားတဲ့ မြန်မာဖောင့်အလှတွေ စုပေါင်း တင်ထားတဲ့ ဒီပို့စ်ကို တစ်ခြားဆိုဒ်တွေမှာ ပြန်လည်မျှဝေချင်တယ်ဆိုရင်
ကျွန်တော့်ဆိုဒ်လင့်ကို ပို့စ်ရဲ့ တစ်နေရာရာမှာ ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ စေတနာနဲ့ အပင်ပန်းခံ
လုပ်ပေးထားတာကြောင့် အလွယ်တစ်ကူ ကူးယူမျှဝေတာမျိုး မဖြစ်စေချင်ပါ။ နားလည်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
Posted by Thurainlin at 05:01
Labels: Effect, Flash, Font